Semalt: Famoronana tranokala dinamika miaraka amin'ny tapa-tranonkala Chrome Extension
Web Scraper dia plugin ho an'ny Chrome Chrome natsangana mba hanangonana rakitra avy amin'ny tranokala sy tranonkala. Ampiasao ny fanitarana chrome tranokala , azonao atao ny mamorona ny sitemap amin'ny fomba tokony hakana pejy iray na tranonkala iray.Miaraka amin'ny sitemap anao dia mivezivezy misy pejy iray ny tranokala ary mametaka ireo angona azo itokisana araka ny torolalana.
Ny raki-tsoratra azo amin'ny fampiasana ny tranombarotra extension chrome dia alefa amin'ny endri-tsoratra (CSV). Ny mpangalatra amin'ny tranokala dia toto-toto-toto-pikirakely izay azo ampiasaina amin'ny olona rehetra. Izany dia afaka mamonjy ny volanao sy ny fotoana ary miaraka amin'ny fotoana iray dia mamoaka vaovao sarobidy manerana ny tranonkala - ft910.
Ny tranonkala dia feno angon-drakitra mahasoa sy manan-danja. Na izany aza, ny fahazoana ny angona azo ampiasaina amin'ny format azo ampiasaina sy azo vakina dia tsy mora foana. Izany no antony ilanao ny fananganana tranokala hafa. Ny rakitra ho an'ny daholobe, ny lisitr'ireo rakitra, ny lisitry ny fifaninanana, ary ny fanadihadian'ny mpampiasa dia mety ho lasa angon-drakitra. Amin'ny web Scraper, ireo angon-drakitra rehetra ireo dia azo kosehina ary voavonjy tsara.
Tsindrio ny tsy fahombiazan'ny bokotra
Tsy ampy URL ny rohy popup
Web Scraper: Ny olana Solver
Web Ny haingon-tsakafo dia fitaovana maimaim-poana sy mora ampiasaina. Mba hisintonana ny angon-drakitra avy amin'ny tranonkala sy tranokala, tsy maintsy misafidy ny lahatsoratra lasitra ianao raha toa ka manao ny sisa amin'ny asa ny tranokala. Koa satria ny haingon-tranonkala dia manamboatra ny rahona, tsy voatery hisalasala amin'ny fahadisoana miharo na olana hafa ianao.
Amin'ny ratrao amin'ny tranokala, ny valin'ny fangatahanao dia alefa haingana ao anaty rakitra CSV. Raha tianao ny mitahiry ny angona ao amin'ny Couch DB na ny tranokala Chrome ao an-toerana. Tsy ilaina ny hisavoritaka satria tsy mpandahateny ianao. Raha azonao atao ny mampiasa ny Google Chrome, dia azonao atao ny mampiasa rindrambaikan'ny tranombarotra chrome.
Raha ny vahaolana manaraka dia ny hanànana tafika iray mpikaroka mba hamehezana ny angona ho anao isan'andro, dia voka-pifandrenesana fotsiny no nandondona teo am-baravaranao. Amin'ny tranokala vohikala, tsy mila programa mpamorona ianao mba hampivelatra vahaolana ho an'ny angona. Ny dingana rehetra momba ny fitrandrahana rakitra dia natao ho anao. Afaho maimaim-poana ny tranokala Google Chrome ao amin'ny Google Chrome.
Karazana fonosana tranokala
Web Scraper dia manana singa ampidirina izay manampy amin'ny fizotran'ny tetikasainao. Ireto misy endri-javatra manan-danja tokony ho fantatrao:
Miaraka amin'ny navigateur Chrome
Web Scraper dia plugin izay mamoaka ny angona araka ny sitemap. Amin'ny alalan'ity fanitarana ity, dia afaka mihazakazaka singa tokana na maromaro ianao na manaparitaka tahirin-tserasera goavana amin'ny alalan'ny fandaharam-potoana voatokana.
Ampidirina angon-drakitra fanampiny toy ny CSV
Ity plug-in chrome ity dia mandefa ny angon-drakitra asehon'ny komity misaraka. Na izany aza dia azonao atao koa ny mitahiry ireo angon-drakitra voatahiry toy ny ao amin'ny CouchDB na ny fitehirizana ny tranokala Chrome.
Ny angon-drakitra avy amin'ireo tranonkala dynamika sy pejy
Amin'ny fampiasana plugin plugin, dia azonao atao ny manangana sitemap izay mamaritra ny laha-tahiry amin'ny pejy Internet. Alaivo ny alahelonao amin'ny sehatra hafa amin'ny alàlan'ny fametrahana Web Scraper ao amin'ny navigateur Google Chrome!